Computer Technical Notes & Sharing Softwares: Hacker တွေအတွက်မလွယ်ပါဘူး
Team Viewer မသုံးပဲ Team Viewer လိုပဲကြည့် ကြည့်ကြ...
DriverScanner 2011 ဆောစ့်ဝဲလ်နှင့်Genuine Activato...
blogspot.com မှ co.cc ပြောင်းနည်း
Avira Premium Security 184ရက်လိုင်စင် free ယူနည်း
Isa server 2006 မြန်မာလိုစာအုပ်
Wamp Server နှင့် Joomla 1.5 အား တည်ဆောက်ခြင်း။
Antivirus AVG9Pro with key to 2018 | 112 MB
How to enable or disable comments in google + ?
Google Hack 1.6 - Get Direct Links For Everything
phone no. ထည့်စရာမလိုပဲဂျီမေးအကောင့်ဖွင့်နည်း
သင့်ရဲ့ Password တွေကို Hacker တွေက ဘယ်လိုခိုးလဲ ?...
Window တင်ပြီးရင် လိုအပ်တဲ့ Application များ
Folder မ Lock ဘဲ့နဲ့ Floder ဖျောက်မယ်
Virus တွေဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ
WINDOWS7Final Retail Version rar (10.08)MB
WinR ကို ဘယ်လို Passwoard ထည့်မလဲ?
USB များကိုvirus စစ်ပေးမယ့်USB Disk Security
Avast Internet Security 6.0 free 270 Days License ...
No.of Character Possible combinations Human Computer
1 36 3mins 0.000 018 sec
2 1300 2hrs 0.000 65 sec
3 47000 3days 0.02 sec
4 10000003months 1 sec
5 60000000 10 yrs 30 sec
10 3700000000000000 580 million yrs 59 yrs
အထက်ပါ list လေးက networking စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ password အကြောင်းလေးပါ..ဒါကတော့ hacker သမားတွေရဲ့ သုံးတဲ့ software လေးတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် password hacker ကတော့ တကယ်မလွယ်ပါဘူး။ အထက်ပါအတိုင်းက alphabet (26) လုံးထဲက (10) ကိုထားမယ်ဆိုရင် တောင်အပေါ်ကအတိုင်း သူတို့က ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ ၁ ၂ ထားမယ်ဆိုရင် သူတို့က ၀ ၁ ပြီးရင် ၀ ၂ ပြီးရင် ၀ ၃ ဆိုပြီးစသည်ဖြင့် software က မှန်းပြီးတော့ လုပ်မှာဖြစ်တယ် ဆိုတော့ လူဆိုရင်တော့ အထက်ပါလိုဆိုရင် ထီးတွေ၊ချဲ တွေ တွက်သလိုတွက်ရမှာပေါ့...ဒါပေမဲ့ software ကျတော့ computer ဦးနှောက်နဲ့ အထက်ပါတွေ့ တဲ့အတိုင်း ခဏဘဲကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်က ဥပမာက နှစ်လုံးထဲကိုတောင် ဒီလိုမျိုး လူဆိုရင် နှစ်နာရီကြာမှာဖြစ်ပါတယ်. ဒါပေမဲ့ Hacker ဆို တာက Computer hacker ဆိုတော့ သူက Computer သုံးမှာပေါ့ ဒါကြောင့် သူ့အတွက်တော့ 0.00065 စက္ကန့်ဘဲ ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က ၁၀ လုံးလောက် ထားပြီးဆိုရင်တော့ Computer လဲ ၅၉ နှစ်လောက်တော့ အေးအေးဆေးဆေး မှန်းပြီးတော့ လုပ်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ကျွန်တော် စဉ်းစားကြည့်တယ် Computer ကတော့ မပိတ်ဘဲနေမှာ မဟုတ်ဘူး.ဒါကြောင့် 10 လုံးလောက်ထားရင်တော့ Hacker တွေလဲ hacker တော့မှာ မဟုတ်ဘူး ဒီဟာလေးရေးလိုက်တာက ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လဲရေးရင်နဲ့ မှသတိထားမိတယ်. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ password5လုံးဘဲ ထားတဲ့ဟာနဲ့ 10 လုံးထားတဲ့ နှစ်ခုကို hacker software နဲ့ မှန်းတဲ့နေရာမှာ အချိန်က အများကြီးကွာ သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဆို ၁၀လုံး ထားဖို့က ထားစရာ password မရှိဘူး..ဒါပေမဲ့ ဒါလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့ အခါမှာ သူတို့ရဲ့ ကွာခြားချက်ကြောင့် ကိုယ်လုံခြုံရေးကို သတိထားပြီး ၁၀ လုံးလောက်တော့ ထားရမယ်ဆိုတာကို သတိထားမိသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေ တို့လဲ password ကိုထားတဲ့ အခါမှာ ၁၀ လုံးလောက်တော့ ထားသင့်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်ပြောသလို ကျွန်တော်လဲ ၁၀လုံးလောက် password ထားဖို့ မရှိဘူးဆိုတော့ ဘယ်လိုထားရမလဲဆိုရင်....
ဥပမာ ကိုယ့်က password ကိုအရင်က itresharesite လို့ပေးထားတယ်.ဆိုရင် iTrEsHaReSiTE စတာမျိုးပြီးတော့ +×-(*)&^%$#@!~`?/ ဒါမျိုးတွေကိုလဲထည့်ပေးရင် ပိုပြီးတော့ hacker တွေအတွက် ခက်မှန်းရခက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် ကိုယ့်မှာသာ တာဝန်ရှိပါကြောင်း.. ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
Posted by SLIP at 4:30 PM